Ihe a niile ka m ga - enye gị: nkata juputara n'ihe omimi, enweghị ntaramahụhụ na anyaukwu | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ihe a niile ka m ga-enye gị bụ akwụkwọ nke ise nke onye edemede Basque bụ Dolores Redondo, e bipụtara ya na 2016. Ọ bụ akwụkwọ mpụ mpụ edepụtara na Galician Ribeira Sacra, nke nkata ya juputara n'ihe omimi, enweghị ntaramahụhụ na anyaukwu. Site na ọrụ a, ndị ode akwụkwọ meriri mbipụta nke iri isii na ise nke atụmatụ Planeta, ka ha nyechara aha akwụkwọ ahụ Anyanwụ nke Thebes, na n'okpuru aha nzuzo Jim Hawkins.
Na mgbakwunye na onyinye dị mkpa a kpọtụrụ aha, Redondo ghọrọ onye edemede Spanish mbụ iji nweta Onyinye Bancarella (2018), maka nsụgharị oftali nke akwụkwọ a. Otu afọ mgbe e mesịrị, saịtị dị ugbu a Business Insider họọrọ akwụkwọ akụkọ ahụ dị ka onye nnọchi anya ógbè Lugo, na edemede nke isiokwu ya bu: "Njem akwukwo banyere Spain maka akwukwo akwukwo", nke Ana Zarzalejos dere.
1 Na nchikota nke ihe ndia m gha enye gi (2016)
2 Nyocha nke ihe a niile m ga - enye gị (2016)
2.2 Okwu dị iche iche
2.3 Okirikiri ala nke Galician Ribeira Sacra
3.1 Oge ntorobịa na ọmụmụ ihe ọkachamara
3.2 Ọrụ dị ka onye siri nri
3.3 Egwuregwu edemede
3.3.1 Akwụkwọ nke Dolores Redondo dere
Na nchikota nke Ihe a niile ka m ga-enye gị (2016)
Ihe a niile ka m ga-enye gị ...
Otu ụtụtụ, Manuel dere njedebe nke akwụkwọ ikpeazụ ya: Anyanwụ nke Thebes; na mberede kụọ aka n'ọnụ ụzọ gị, na mgbe imeghe ya na-ezute ndị nche abụọ edo edo. Ndị ọrụ ahụ jụrụ ya ozugbo ma ọ bụ onye ikwu Álvaro Muñiz de Dávila, na mgbe ha kwenyesiri ike na ọ bụ di ya, ha gwara ya maka ọdachi ahụ: Álvaro nwere ihe mberede okporo ụzọ na Galicia ebe ọ nwụrụ na nwute.
Nnọọ emetụta na n'otu oge ahụ nwere mmasị, Manuel na-aga Ribeira Sacra. Na-abịa, gosipụtara ọnwụ nke ịhụnanya maka ndụ ya, Na agbanyeghị nchegbu ya maka ihe merenụ, ikpe ahụ emechiela. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ ga-amalite ịchọpụta nkọwa nke ndụ di ya nwụrụ anwụ, otu n'ime ha bụ na ọ bụ ezinụlọ nke ndị eze Galician, ndị bi na mpaghara ebe ihe ndị a mere.
Ndị ọgọ ya jụrụ ya ma mikpuo onwe ya na mwute. Manuel na-aga ịlọghachi mgbe Nogueira, onye nche ezumike nka lara ezumike nka gbochiri ya. Nke a na - eweta enyo ya enyo n'ihe metụtara ikpe ahụ, nke na - eme ka obi sie ya ike banyere ọnwụ nke onye ọlụlụ ya na ezinụlọ ya dị omimi. Inyo mmadụ enyo na nghọta nke onye uwe ojii ahụ, yana ịchọ ịmata ihe na iwe nke Manuel, ga-eduga ha ịjụ banyere ihe mberede “chere”.
Nchoputa a ga - esonye na onye nchu aja Lucas, onye duziri olili ozu ma buru enyi nwata nke onye nwuru anwu. Nke nta nke nta, ihe ọhụrụ na ihe ịtụnanya banyere Álvaro —ozikwa onye biri ndụ abụọ ga - apụta., nke nwere ike iduga onwu. Ihe atọ a ga - akpata ọgba aghara n’ezinụlọ a ma ama, ndị ga - anwa igbochi ha iru eziokwu ahụ; Ma mgbalị gị ga-abụ ihe efu.
Nyocha nke Ihe a niile ka m ga-enye gị (2016)
Ọ bụ akwụkwọ omekome nke mbụ ya bụ Madrid, ma mesịa kwaga Chantada, nke dị na Lugo na Galicia. Akwụkwọ nwere ntakịrị karịa 600 peeji, kewara n'ime 47 isi ma kọọrọ ya onye nke atọ site n'aka onye maara ihe niile. Na ibé ọ bụ a haziri nke ọma ma ekpughere ya n’elu ntapu mmiri, nke n’emebi nduhie site na mmalite, rue ogwugwu ijuanya.
Okwu dị iche iche
Akụkọ a na-ekwu ọtụtụ okwu, gụnyere nyocha nke ihe mberede ahụ, bụ nke onye protagonist na ndị otu ya abụọ mere. N'ihi ya, a ga-ekpughe ọtụtụ ihe nzuzo, ụgha na omume na-akwadoghị nke ezinụlọ a ma ama ma bụrụ ndị ndị obodo na-akwanyere ùgwù. Ọ na-egosikwa ọtụtụ ọdịbendị na omenala ndị Galia, ma nke obodo ma nke okpukpe.
Okirikiri ala nke Galician Ribeira Sacra
N'ime akwụkwọ akụkọ a, onye edemede ahọpụtara Galicia dị ka ntọala maka mmepe nke ndị odide ahụ. A na-akọ akụkọ ahụ na pazo de los marquises de Santo Tomé, ebe a na-echeghị eche echiche mana ọ dịkwa ka mpaghara mpaghara Lugo. Territorykèala ahụ dịtụ ntakịrị na oyi n'ihi ihu igwe ya, mana ya na ala di egwu ma di nma, nke Redondo kowara nke oma na akwukwo.
Ọ bụ onye ọchụnta ego, onye nwụrụ na mbido nkata ahụ; ọ ga-abụ isi axis na akụkọ ahụ. Nke mbu, n’ihi onwu di omimi ya; na nke abụọ, maka ndụ nzuzo ya. Dika akwukwo ohuru n’egosiputa, ndi ikwu ya - ndi bu akuku ndi Galistist - na ihe ndi kpatara ya jiri bi ndu abuo di otua.
Ọ bụ onye edemede, onye ghọrọ onye ama ama maka akwụkwọ akụkọ mbụ ya ma lụọ Álvaro. Manuel ga-agafe n'ọtụtụ ọkwa, site na ịjụ iwe mgbe ọ chọtara ihe nzuzo di ya. Eziokwu gị ga-agbanwe nke ukwuu n'ihi ọnwụ ya; ya na ezin’ulo ohuru, oke nketa na otutu enigmas nke n’eme ka ebe obibi ojoo di.
Ọ bụ nna Katọlik yana ezigbo enyi Álvaro, iguzosi ike n'ihe nke ọbụbụenyi n'ezie ga-apụta ìhè n'ime ya. Luk ga-enye Manuel nkwado na-enweghị atụ ọ ga-echetakwara ya na ọ ma ezigbo Álvaro. Ọzọkwa, onye edemede a ji agwa a gosipụta ajọ ọnọdụ dị iche iche na-emerụ ụka ahụ na anaghị apụta ìhè.
Ọ bụ onye ọrụ ezumike nka nke Spanish Civil Guard, nwoke omenala ezinụlọ, na-agbasosi ụkpụrụ ike. Omume a ga-enwe nkwado dị ukwuu maka Manuel na ase banyere ọnwụ Álvaro. N'ihi ahụmịhe a, ị ga - agbanwe, ị ga - abụkwa onye na - anabata ndị ọzọ.
Nkebi ahịrịokwu nke Dolores Redondo.
Maria Dolores Redondo Meira Amuru ya na Donostia - San Sebastián, na Satọdee Febụwarị 1, 1969. Ọ bụ ọkpara nke alụmdi na nwunye Galician; nna ya, onye ọrụ ụgbọ mmiri; na ndzɛmba nyina yɛ nokwar. O nwere oge ọ bụ nwata mara akwa akwa na ihe mgbu, ebe ọ bụ na ọ gbara afọ ise, nwanne ya nwanyị nke ọ tọrọ nwụrụ. N'oge ndị ahụ gbara ọchịchịrị onye edemede ahụ kwupụtara na ya agbabawo n'ịgụ akwụkwọ iji zere duel.
Oge ntorobịa na ọmụmụ ihe ọkachamara
Site na nwata o nwere obi uto maka akwukwo; a los Afọ iri na anọ o dere akụkọ mbụ ya na emesia o sonyere na asọmpi dị iche iche na mpaghara a. N'ihe kwekọrọ na ọrụ ya dị ka onye edemede, ọ malitere ọmụmụ ya na Iwu na Mahadum Deusto, ọrụ ọ kpebiri ịgbanwe gaa na ọrụ ọzọ ọ na-arụ: isi nri; ya mere ọ gụrụ ma gụsịrị akwụkwọ na mweghachi nke gastronomic.
Ọrụ dị ka onye siri nri
Naanị mgbe ọ dị afọ 24, ọ bụrụla onye isi nri na azụmaahịa nke ya, obere ebe di na San Sebastián. Mgbe afọ abụọ nke ịrụsi ọrụ ike na ọtụtụ mmụta gasịrị, o kpebiri imechi ya n'ihi enweghị ego, ebe ihe anaghị aga dị ka atụ anya ya. Ka oge na-aga, ọ gara n'ihu na-arụ ọrụ dị ka osi nri n'ụlọ nri ndị ọzọ, adịla jụụ ma na-enweghị ọtụtụ ibu ọrụ ma ọ bụ nchegbu.
Na 2009, onye edemede San Sebastian bipụtara akwụkwọ mbụ ya Ihe ùgwù nke mmụọ ozi ahụ. Afọ anọ mgbe e mesịrị, ọrụ ya were ntụgharị ogo 180, mgbe o gosipụtara egwuregwu ahụ Onye nlekọta a na-adịghị ahụ anya (2013), nke o ji malite Baztán trilogy. Saga a ghọrọ ihe edemede na ngwa ngwa E rere 700.000 ma sụgharịa ya n’ihe karịrị asụsụ iri atọ n’ụwa niile.
Mgbe ihe ịga nke ọma a dị ịrịba ama, akwụkwọ ọgụgụ bipụtara Ihe a niile M ga-enye (2016), akwụkwọ akụkọ nke ọ natara ya Onyinye mbara ala nke otu afọ ahụ. Na 2019, egosiri Ugwu nke ugwu, a prequel ka Baztán trilogy nke ekpughere ndị na-agụ akwụkwọ mmalite nke ọrụ nke saga, Amaia Salazar.
Akwụkwọ nke Dolores Redondo dere
Ihe ùgwù nke mmụọ ozi ahụ (2009)
Onye na-adịghị ahụ anya (2013)
Ihe Nlekọta na Ọkpụkpụ (2013)
Inye Oké Ifufe (2014)
Ihe niile a ka m ga-enye gị (2016)
Ugwu North nke Obi (2019)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Ihe a niile ka m ga-enye gị